Tottenham Hotspur oo garoonka Wembley ku garaacday Man United+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Tottenham Hotspur oo garoonka Wembley ku garaacday Man United+SAWIRRO
Tottenham ayaa guul weyn ka gaartay dhigeeda Man United iyadoo kulanka Wembley uu ahaa mid ay cadaadis badan la kulmeen wiilasha tababare Jose Mourinho kuwaas oo xabaaray guuldaro ay u qalmeen.
Christian Eriksen ayaa ilbiriqsiyadii ugu horeeyay kulanka dhaliyay goolka furitaanka ee ciyaarta kadib markii uu kubad cirib ah ka helay Dele Alli, wuxuuna ahaa gool si dhaqsi leh ay ku abuureen wiilasha Spurs.
Daafaca reer England Phil Jones ayaa kubad shabaqiisa ku leexiyay shabaqiisa, waxaana ku qasbay daafaca da’da yar ee Spurs Tripier.
Labada kooxood midkoodna kuma guuleysan iney gool kale dhaliso inkastoo Spurs ay mar walba aheyd kooxda ugu cad-cad kulanka isla markaana ay dhawr fursad abuureen balse aysan u suuragalin iney helaan gool.
Sanchez ayaa la kulmay guuldaro kulankiisii ugu horeeyay kooxdiisa cusub ee horyaalka Premier League, waxeyna natiijada kusoo dhamaatay 2-0 oo ay Spurs guul ku gaartay.
Natiijada ka dhacday garoonka Wembley waxey ka dhigan tahay in Red Devils ay hal talaabo gadaal u qaaday madama ay Citizens 15-dhibcood ku hogaamineyso horyaalka Premier League kadib guushoodii West Brom.